आजदेखि नयाँ मुलुकी संहिता २०७४ लागु, के गर्दा के सजाय ? (विवरणसहित)
By vijayafm on	 August 17, 2018 देश, नमुना ग्राम सञ्चार अभियान, फोटो फिचर, विविध खबर
सरकारले आजदेखि नयाँ मुलुकी संहिता २०७४ लागू गर्दैछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गर्दै आजदेखि नयाँ संहिता लागू गर्न लागिएको हो । आजदेखी मुलुकी ऐन लागु भएपछि धेरै कुरामा सजग हुनुपर्ने भएको छ ।
के छ नयाँ मुलुकी संहितामा ?
देवानी कानूनमा छोरा/छोरीले आफ्ना आमा बाबुलाई आदर, सम्मान तथा हेरविचार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न नपाउने व्यवस्था भइरहेकामा कुनै व्यक्तिको आर्थिक हैसियत विचार गरी अदालतले छोरी वा छोरी हुने व्यक्तिलाई पनि धर्मपुुुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिने आदेश गरेमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने छ ।